चुइंगमका १० बिचित्र कहानी - Nepali Virals
११ फाल्गुन २०७२, मंगलवार १२:००	1,757 पटक-पढिएको
बालकदेखि बृद्धसम्म सबैलाई उत्तिकै मन पर्ने चुइंगम युवायुवतीहरुका लागि त झन् फेसन नै बन्ने गरेको छ । त्यसो त बजारमा यसका स्वाद, मूल्य र आकारमा बिभिन्न भेराइटीहरु उपलब्ध छन् । नेपालमा मात्रै होइन बिश्वभर यसको क्रेज बढ्दो छ । कतिपयले यसलाई फेसनका रुपमा प्रयोग गर्ने गर्छन भने कतिपयले स्वाद र मुख गान्हाउने समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि चपाउने गरिन्छ । कोही कोहीलाई त यो नशा नै बन्ने गरेको छ । तर पनि यसका बिचित्र कहानीहरुका ’boutमा भने कमैलाई मात्र जानकारी होला । जुन थाहा पाएर तपाई आश्चर्यचकित पर्नु हुनेछ ।
१. चुइंगम खानेलाई ५ सय डलर जरिवाना
तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ सिंगापुरमा चुइंगम खान रोक लगाइएको थियो । चुइगम खानेलाई त्यहाँ ५ सय डलर जरिवाना तिराउने गरिथ्यो । तर यो प्राबधान १२ बर्षपछि फुकुवा गरिएको छ । तर अझै पनि पूर्ण रुपमा फुकुवा गरिएको भने छैन । चुइगम किन्न डाक्टरको अनुमति चाहिन्छ । साथै चुइंगम उत्पादन कम्पनीले पनि उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर केही सर्त हरु पूरा गर्न पर्छ ।
२. चुइंगमको भिडियो गेम
सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ चुइंगमले कसरी भिडियो गेम खेल्न सक्छ र भन्ने । तर सत्य हो । सन् २०१३ मा सार्वजनिक भएको यो गेमको नाम हो गुमुलोन ।
३. चुइंगम दिन खोज्दा पक्राउ
एनएफएल खेलाडीहरु बिभिन्न कारणले पक्राउ पर्ने गर्छन । तर एक जना खेलाडी ड्वाने ग्रेडज अनौठो कारणले पक्राउ परे । उनले पसलमा समान किन्दा पैसाको सट्टा आफुले खाएको चुइंगम दिन खोज्दा पक्राउ परेका हुन् । उनले माफी मागे पनि स्टोरकिपरले नमानेपछि उनलाई पक्राउ गरियो ।
४. चुइंगम चोर
सन् २०१२ मा इंग्ल्याण्डमा चुइंगम चोरहरु एक नम्बरमा थिए । त्यसताका रोमानियाका एक ग्रुपले ८५० पाउण्ड चुइंगम चोरेका थिए । त्यस्तै ग्रन्थम शहरको प्रसिद्ध स्टोर अस्डाबाट एउटा समूहले एक हजार पाउण्ड चुइंगम चोरेका थिए ।
५. चुइंगमको चलन
चर्चित मेक्सिकन नेता एन्टोनीओ डी लोपेजले सुरुमा चुइंगम चपाएको बताइन्छ । सन् १८३६ मा उनलाई शमु हस्टनमानिस द्वारा कैदी जीवन बिताइरहेका थिए । यस समयमा, उनले आफ्नो स्नायु शान्त रहन मदत गर्न जंगलमा पाइने चिकल भनिने रुखको सुकेको रस चपाएका थिए । जब उनी कब्जाबाट मुक्त भए त न्युयोर्कमा प्रसिद्ध आविष्कारक थमस एडम्स अगाडि यो chewed जहाँ लगे। र यसलाई तातोपानीमा घोलेर स्थानीय पसलमा बिक्रीका लागि राखियो । यसमा कुनै स्वाद थिएन तर पनि उपभोक्ताले रुचाए ।
६. चुइंगमको सहारामा ३३ घण्टा निरन्तर उडान
यदि चुइंगम नभएको भए चार्ल्स लिन्डबर्गले इतिहास रच्ने थिएन । सन् १९२७ मा उनले न्युयोर्कदेखि पेरिससम्म निरन्तर ३३ घण्टा उडान भरेका थिए । जुन चुइंगमकै कारण सम्भब भएको हो । उक्त उडानमा उनले निन्द्रा, भोक, मौसम, सम्पर्कबिहिन लगायत थुप्रै चुनौती सामना गरेका थिए । १५ घन्टा बिश्वका कुनै पनि ठाउमा सम्पर्कबिहिन भएको थियो । त्यतिबेला उनले विमानको क्मपास पनि हेर्न सकेका थिएनन । तर चुइंगमकै सहारामा उनले उक्त कम्पास हेर्न सके र निरन्तर उडान भरे ।
७. चुइंगम पड्केर मृत्यु
सन २००९ मा एक युवतीको आफुले खाइरहेको चुइंगम बिस्फोट भएर मृत्यु भएको थियो । भ्लादिमिर लिखोनोस नाम गरेकी २५ बर्षीय उनी केमिस्ट्रीका बिद्यार्थी थिइन् । यो बिस्फोट हुँदा ठूलो आवाज आउनुका साथै उनको मुख समेत बिग्रेको थियो ।
८. चुइंगमले बाँचेका सुपरस्टार
प्रसिद्ध सुपरस्टार जेक गाइलेन्हाल मात्र चिया र चुइंगममा बचेको बताइन्छ । चुइंगमले उनको सोच्ने शक्ति कन्ट्रोल हुनुका साथै अघाएको महशुस हुने उनको भनाइ छ ।
९. चुइंगमको एक टुक्राका लागि १४ हजार डलर
आफ्नो मन पर्ने मान्छेका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन मान्छेहरु । हो, सन् २००४ मा एउटा अचम्मको घटना भयो जुन चुइंगम संग सम्बन्धित छ । लोकप्रिय ब्रिट्नी स्पेयर्सको एक टुक्रा चुइंगमका लागि एक व्यक्तिले १४ हजार डलर तिर्ने प्रस्ताब गरेका थिए ।
१०. चुइंगमको उत्पादन कहाँबाट ?
आर्मीको कमब्याट गमका रुपमा पेन्टागनमा चुइंगमको उत्पादन थालिएको बताइन्छ । त्यहाँ आर्मीलेहरुले स्वाश र दांतको समस्याबाट मुक्तिका लागि यसको प्रयोग गर्ने गर्थे । यसका लागि उनीहरुले एस डलर सहयोग गर्ने गर्थे ।
अघिल्लो विश्वका १० सर्वाधिक सुन्दरीहरु
पछिल्लो मोदीको भाषण: जुनसुकै भाषामा पनि खररर कसरी ? यस्तो छ रहस्य